Uyifaka njani iSigil kwikhompyuter yethu | Zonke iiReaders
Uyifaka njani iSigil kwikhompyuter yethu
UJoaquin Garcia | | Sigil, software
Yonke imihla kuqhelekile ukusebenzisa amaqonga okuzipapasha ukuthengisa incwadi yethu ye-ebook. Kodwa kude nenkonzo ebonelelwa zezi nkampani, inyani kukuba i-ebook elungiselelwe iyahamba yenziwe ngesixhobo se-ebook hayi ngegama elidumileyo leMicrosoft okanye elinye iprosesa yamagama.
Enye ye Ezona zixhobo zibalulekileyo nezasimahla zokwenza i-ebook yiSigil, isixhobo esele sithethe ngaso apha kwaye namhlanje siza kukuxelela indlela yokuyifaka kwikhompyuter yethu, ukuba, ifom iya kutshintsha kuxhomekeke kwinkqubo yokusebenza esiyisebenzisayo.
I-Sigil sisixhobo sasimahla nesinqamlezayo. Okwangoku malunga nokufikelela kuguqulelo lokuqala, Oko kukuthi, iSigil 1.0, ebonisa Ukukhula okuhle okuza kusetyenziswa njengomhleli weencwadi zethu ozithandayo. Ukufakwa kwayo kufuneka siqale ngoku iphepha lokukhuphela kwaye ukhuphele iphakheji ehambelana nenkqubo yethu yokusebenza.
1 Ungayifaka njani ukuba sineWindows
2 Uyifaka njani ukuba unayo iMacOS
3 Uyifaka njani iSigil kwi-Ubuntu / Debian okanye kwiziphumo
Ungayifaka njani ukuba sineWindows
Ukufaka iSigil kwiWindows, kufuneka siqale sijonge ukuba sisebenzisa i-64-bit okanye i-32-bit yeWindows, ukukhetha iphakheji ekufuneka siyikhuphile. Ukuba asazi, singasebenzisa iPhaneli yokuLawula kwaye kwikhompyuter yam sinokubona ukuba loluphi uhlobo lwenkqubo. Nje ukuba iphakheji echanekileyo ikhutshelwe, sicofa kabini kwaye siqalise ukufakela iwizard, iwizard ekulula ukuyilandela kuba uhlala ucinezela "elilandelayo" okanye "elilandelayo" iqhosha kude kube sekupheleni. Nje ukuba sigqibile siya kuba noSigil ekulungele ukuhamba.
Uyifaka njani ukuba unayo iMacOS
Kwimeko yokuba neMac, ukusebenza akufani kakhulu. Kuqala kufuneka sikhuphele ifayile yeSigil dmg. Emva koko kufuneka ucofe kabini kwiphakheji ukuqala ufakelo. Mhlawumbi wethu IMac ayikuvumeli ukufakwa kweephakeji ezingekho semthethweniUkuyiguqula siya kukhetho lweNkqubo kwaye kuKhuseleko kunye nokuBucala siguqula ukhetho olusezantsi oluthi "vumela usetyenziso olukhutshelwe kwi:" ukhetho esinokuthi sibuyele kulo emva kokufaka iSigil. Xa sikuguqula oku, siya kwisicelo seSigil kwaye ucofe kwakhona ukuqala ukufakela iwizard.
Uyifaka njani iSigil kwi-Ubuntu / Debian okanye kwiziphumo
Ukufaka i-Sigil kwi-Gnu / Linux kulula kuba yinkqubo leyo ifumaneka kuzo zonke iindawo zokugcina ezisemthethweni, ke ukuba sino Ubuntu okanye iDebian, kufuneka sivule kuphela i-terminal kwaye sibhale: sudo apt-get install sigil Kwaye emva koku, ukufakwa komhleli we-ebook owaziwayo kuya kuqala.
Njengoko ubona, iSigil yinkqubo elula ukuyifaka kwaye koku kongezwa inyani yokuba kunjalo Olunye uhlelo olusebenziseka lula lokudala ii-ebook ezinobungcali kunye nezilungiselelwe. Ke ngoku asinazizathu zokusebenzisa iSigil endaweni yeLizwi okanye enye iprosesa yamagama Ngaba unesibindi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » software » Uyifaka njani iSigil kwikhompyuter yethu
UJuan Sebastian Quintero sitsho
Iluncedo kakhulu. Ikwasivumela ukuba sibone ikhowudi yee-Ebook esizithengileyo, kwaye ukuba siyayithanda, sinokuyixelisa ukuyila eyethu.
Phendula kuJuan Sebastian Quintero
Ndingumsebenzisi weSigil kwaye ndiyaxolisa andiyifumani kwiChbookbook, nini? kodwa, ungaphenduli, ndiyazi ukuba ayisiyonto yakho ... Ndiyabulisa
Iivenkile ezinkulu zeAldi ziqala ukuthengisa eyazo iReader
aNobii, imbangi enzima yeGoodreads